Gcina Ukholo, Mashi Phambili -Celebrating umgubho weminyaka eyi-11 ka-Shandong Senmao Machinery Co., Ltd - China Shandong Senmao Imishini
Gcina Ukholo, Mashi Phambili -Celebrating umgubho weminyaka eyi-11 ka-Shandong Senmao Machinery Co., Ltd
On the Meyi 14, 2018, ukuze sigubha iminyaka llth ukusungulwa Shandong Senmao Machinery Co., Ltd, usihlalo wethu, uMnu Dexue Ma, wahlela izivakashi Mount Tai. Kwakubuye kube yonyaka isikhathi sokuhamba collective yenkampani.
Shandong Senmao Machinery Co., Ltd kuyinto ibhizinisi okuhlangene ngubani ezikhethekile ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza futhi yokuthengisa kwezinkuni ezisekelwe imishini panel imishini. ikakhulukazi Imikhiqizo yethu: ashisayo cindezela umshini, abandayo cindezela umshini, othomathikhi plywood izindlu umshini, othomathikhi onqenqemeni ilungiswe isaha, emvelweni umugqa ukukhiqizwa ibhodi nezinye izinhlobo eziningi emigqeni ekukhiqizeni.
Sinamathela starting okusezingeni eliphezulu iphuzu imishini design, izimfuneko izinga okusezingeni eliphezulu, amasevisi indinganiso ephakeme futhi silwele ukusebenzisa ubuchwepheshe okusezingeni eliphezulu kanye namasevisi neyobuntu, ukudala umkhiqizo esezingeni lomhlaba.
Sithemba imikhiqizo yethu ungakha izimangaliso entsha sokuthuthukiswa career yakho.
Sibheke phambili nokubambisana eside nawe ngobuqotho!
isikhathi Thumela: Jul-05-2018